စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းစီမံကိန်းစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း - အဆင့် ၁၀ ထက်သာလွန်သောရလဒ်များ။ Martech Zone
ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိခြင်း - စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိခြင်းနှင့်ပရိသတ်၏ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းမရှိသော ၀ ယ်ခြင်းခရီးတွင်အဆင့်များထပ်နေသည်။
ဦး တည်ချက်မရှိခြင်း - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများသည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အလုပ်များစွာလုပ်လေ့ရှိပြီးအရေးအကြီးဆုံးသောအရာကိုလက်လွတ်သည် - ပရိသတ်အားသူတို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်သင့်သည်ကိုပြောပြသည်။
သက်သေအထောက်အထားမရှိခြင်း - စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရဲ့အယူအဆကိုပံ့ပိုးရန်အထောက်အထားများ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ထောက်ခံစာများ၊
တိုင်းတာမှုမရှိခြင်း - စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်တိုင်းနှင့်၎င်း၏ရလဒ်များကိုတိုင်းတာရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိစေရန်သေချာစေပါ။
စမ်းသပ်ခြင်းမရှိခြင်း - မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောရုပ်ပုံလွှာများ၊ ခေါင်းစီးများနှင့်စာသားများထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
ညှိနှိုင်းမှုမရှိခြင်း - စျေးကွက်သမားများသည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုမကြာခဏတိတ်ဆိတ်စွာပြုလုပ်ကြပြီး၊ အခြားသောကြားခံနှင့်ညှိနှိုင်းသူများအားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်သည်။
စီစဉ်မှုမရှိခြင်း - အလုံးစုံခြုံငုံကြည့်လျှင်…ကျရှုံးမှုအများစု၏အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပင်ဖြစ်သည်၊ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပိုမိုသုတေသနပြုပြီးညှိနှိုင်းလေလေရလဒ်များကောင်းလေလေဖြစ်သည်။
ဒီကွာဟချက်ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီရန်ဒေသဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တစ်ခုနှင့်အတူဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုကျွန်တော်တီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်အသေးစိတ်ရေးဆွဲထားသည့်မူဘောင်ကိုအခြေခံသည် ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စျေးကွက်ခရီး.
ခရီးစဉ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအားမည်သည့်ပဏာမခြေလှမ်းမဆိုစီစဉ်ရန်ထိုင်သည့်အခါအမြဲတမ်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိစေလိုသည်။ ငါဒီစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုခေါ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းစီမံကိန်းစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း - ဒါကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေကိုကန့်သတ်မထားဘူး၊ တွစ်တာကနေစပြီးရှင်းလင်းတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုအထိသင်လုပ်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုတွေအကြောင်း။
စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည်လုံးဝမှတ်တမ်းတင်ထားသောနည်းဗျူဟာကိုမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါ။ ဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး သည်ခြေလှမ်းတစ်ခုကိုမလွဲမသေဖြစ်စေရန်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အမျှသင်၏လုပ်ငန်းသည်သင်ဖြန့်ကျက်သည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းအတွက်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုထည့်သွင်းသင့်သည်။
ဤတွင်ဖြေကြားရမည့်မေးခွန်းများစာရင်းဖြစ်သည် တိုင်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပဏာမခြေလှမ်း။
ပရိသတ်ဆိုတာဘာလဲ ဒီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ်ပိန်းအတွက်? ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်သူတွေ၊ သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ၊ ၀ ယ်တဲ့ခရီးမှာသူတို့ရဲ့ဇာတ်စင်တွေ၊ သင့်ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဟာသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေထက်သာလွန်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူတွေပါ ၀ င်သလဲ။
ပရိသတ်ဘယ်မှာလဲ ဒီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ်ပိန်းအတွက်? ဒီပရိသတ်တွေဘယ်မှာနေသလဲ သင့်ပရိသတ်ကိုထိရောက်စွာရောက်ရှိရန်မည်သည့်ကြားခံနှင့်လိုင်းများကိုအသုံးပြုသင့်သနည်း။
ဘာအရင်းအမြစ်များ ဤစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကမ်ပိန်းကို ခွဲဝေပေးရန် လိုအပ်ပါသလား။ ကမ်ပိန်းကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲရန် သင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် လူများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပလပ်ဖောင်းများကို စဉ်းစားပါ။ သင့်ရလဒ်များကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်သည့် ကိရိယာများ ရှိပါသလား။
သင့်ကမ်ပိန်းတွင် မည်သည့်အထောက်အထားကို သင်ထည့်သွင်းနိုင်သနည်း။ အသုံးပြုမှုကိစ္စများ၊ ဖောက်သည်သက်သေခံချက်များ၊ အသိအမှတ်ပြုချက်များ၊ သုံးသပ်ချက်များ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သုတေသနပြုချက်များ... သင့်အမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သော ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာပြဿနာများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် သင့်အား ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် ကွဲပြားစေရန်အတွက် မည်သည့်ပြင်ပကုမ္ပဏီတရားဝင်ကြောင်းကို သင်ပေါင်းစပ်နိုင်သနည်း။
ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သော အခြားကြိုးပမ်းမှုများ ရှိပါသလား။ ဤအစပျိုးမှု၏ရလဒ်များကို အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန်။ အကယ်၍ သင့်တွင် စာရွက်ဖြူတစ်ရွက်ကို ဖန်တီးနေပါက သင့်တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခု၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးအစေး၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော ဘလော့ဂ်ပို့စ်၊ လူမှုမျှဝေမှု သို့မဟုတ် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော ဖြန့်ဖြူးမှုတို့ရှိပါသလား… သင့်တွင် သင့်ကမ်ပိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ပြန်အမ်းငွေအများဆုံးရရှိစေရန် အခြားမည်သည့်မီဒီယာနှင့် ချန်နယ်များကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းနိုင်မည်နည်း။
အရေးယူရန် တိုက်တွန်းချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြပါသလား။ သင့်ပစ်မှတ်ကို တစ်စုံတစ်ရာလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်နေပါက ၎င်းတို့ကို နောက်ဘာလုပ်ရမည်ကို သေချာပြောပြပြီး ၎င်းအတွက် မျှော်လင့်ချက်များထားပါ။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် ဤအချိန်တွင် အပြည့်အဝပါဝင်ရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါက အခြား CTAs များအကြောင်း သင်စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
သင့်ပရိသတ်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် မည်သည့်နည်းလမ်းများကို သင်ထည့်သွင်းနိုင်သနည်း။ ဒီနေ့ဝယ်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးရင် မင်းရဲ့အလားအလာက သူတို့ကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့ခရီးမှာ ထားနိုင်မလား။ ၎င်းတို့ကို သင့်အီးမေးလ်စာရင်းတွင် ထည့်မလား။ ၎င်းတို့အား တွန်းလှည်းစွန့်ပစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်ပါသလား။ သင့်ပရိသတ်ကို သင်မည်ကဲ့သို့ ပြန်လည်ပစ်မှတ်ထားရမည်ကို စဉ်းစားခြင်းက အချိန်မနှောင်းမီ ဖြေရှင်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
ဤလုပ်ဆောင်မှု အောင်မြင်ခြင်းရှိမရှိ ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့တိုင်းတာမည်နည်း။ ခြေရာခံ ပစ်ဇယ်များ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှု URL များ၊ ပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်ခြေရာခံခြင်း... ကမ်ပိန်းတွင် သင်ရရှိနေသည့် တုံ့ပြန်မှုကို တိကျစွာတိုင်းတာရန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏ရှုထောင့်တိုင်းကို အသုံးချပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နည်းကို သင်နားလည်ပါသည်။
ဤအစပျိုးမှုအောင်မြင်သည်ဆိုသည်ကိုကြည့်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်း။ ၎င်းကိုသတ်ပစ်ရန် သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းပြန်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ရှေ့သို့တိုးရန် လိုအပ်သည့်အခါတွင် ၎င်းသည် အလုပ်ဖြစ်ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုကြည့်ရှုရန် သင့်ကမ်ပိန်းကို အကြိမ်ရေ မည်မျှပြန်လည်လည်ပတ်မည်နည်း။
နောက်တစ်ခုသို့ အသုံးချနိုင်သော ဤစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစပျိုးမှုမှ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသင်ယူခဲ့သနည်း။ သင့်တွင် သင်၏နောက်ထပ်ကမ်ပိန်းကို တိုးတက်စေရန်အတွက် အကြံဉာဏ်များပေးသည့် ကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းထားသော ကမ်ပိန်စာကြည့်တိုက်ရှိပါသလား။ တူညီသောအမှားများမပြုလုပ်မိစေရန် သို့မဟုတ် နောက်လာမည့်ကမ်ပိန်းအတွက် ထပ်လောင်းအကြံဥာဏ်များရရှိစေရန်အတွက် အသိပညာသိုလှောင်မှုတစ်ခုရှိခြင်းသည် သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းသည်တိုင်းတာမှု၊ အရှိန်အဟုန်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုတို့ဖြစ်သည်။ ဒီမေးခွန်း ၁၀ ခုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတိုင်းနဲ့အဖြေပေးလိုက်ပါ။ တိုးတက်လာတာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။
Marketing Campaign Planning Checklist ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
Tags: ပရိသတ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းdownload,အခမဲ့ downloadစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပဏာမခြေလှမ်းpdfpdf ဒေါင်းရန်
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် ဒေတာမောင်းနှင်ရန် အရည်အသွေးရှိသောဒေတာ လိုအပ်သည် - ရုန်းကန်မှုများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ
စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းလုဒ်ဖြင့် သင်၏ WordPress ဆိုက်တွင် PDF Reader ကို ထည့်သွင်းနည်း
28:2017 pm တွင်စက်တင်ဘာ 5, 27 မှာ
အရမ်းကောင်းတဲ့ Doug - အရမ်းကောင်းတဲ့ tool (ပွတ်ဆွဲပြီး ညှိလို့ရတယ်!!)
မတ်လ 1, 2021 မှာ 4: 44 AM
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ် မားကတ်တင်း အလုပ်သင် အခမဲ့ လုပ်ပေးပါလား။
မတ်လ 1, 2021 မှာ 11: 10 AM
မင်္ဂလာပါ Sampada၊ တောင်းပန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒါကိုလုပ်ဖို့ အချိန် ဒါမှမဟုတ် အရင်းအမြစ်တွေ မရှိပါဘူး။